अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्ति चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीतिमा निर्भर छ । घेराउ अर्थात् कन्टेनमेन्ट भनेको आक्रामकता, शत्रुता र भिडन्तको पर्यायवाची हो । र यस्तो रणनीति विफल भएरै छोड्छ ।
वाशिङटनका केही योजनाकारहरूले चीनविरुद्ध शीतयुद्धको नीति अपनाएमा अमेरिकाले सोभियत संघविरुद्ध प्राप्त गरेको जस्तो विजय हासिल हुने सोच राखेको देखिन्छ ।
एटलान्टिक काउन्सिल नामक प्रभावशाली थिंकट्यांकद्वारा हालै प्रकाशित एक लेखमा चीनको घेराउ गर्नुपर्ने तर्क पेश गरिएको छ । त्यसबाट चीन लत्रिने र बेइजिङमा सत्तापरिवर्तन हुने उसको जिकिर छ । उसको लक्ष्य अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धीरहित विश्वव्यापी प्रभुत्व भएको एकल शक्तिका रूपमा उभ्याउने हो ।
यस्तो किसिमको शीतयुद्ध रणनीति वर्तमान विश्वमा लागू गर्नु व्यर्थ छ । अमेरिकीहरूले सोभियत संघलाई त्यतिखेर घेराउ गर्न सकेका थिए किनकि विश्वमा द्विध्रुवीय विभाजन थियो । बाँकी विश्वसँग सोभियत संघको आर्थिक सम्बन्ध थिएन ।
अहिलेको विश्व परिदृश्य बिल्कुल फरक छ । अहिले द्विध्रुवीय नभई बहुध्रुवीय विश्व छ । विश्व अर्थतन्त्र पहिलेको भन्दा बढी एकीकृत छ र चीन संसारकै निर्यात, आयात, लगानी तथा बजारको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।
ट्रम्प प्रशासनले तीन वर्षअघि चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध शुरू गरी चीनलाई लत्राउन कोशिश गरेको थियो । तर त्यो नीति विफल भयो । ट्रम्पले उल्टो अमेरिकी उत्पादक र ग्राहकहरूलाई क्षति गरे ।
यसबाट पनि बाँकी विश्व झैं अमेरिकी अर्थतन्त्र चीनमा निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ । ट्रम्पको व्यापारयुद्ध अनुहारको रिस गरेर नाक काटे झैं हो । त्यो घमण्ड तथा बुद्धिहीनताको उदाहरण थियो ।
बाइडन प्रशासन पनि चीनलाई घेराउ गर्न उत्तिकै लागिपरेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिहरू आउँछन् जान्छन् तर स्थायी सत्ताका योजनाकार तथा साम्राज्यवादी नीति कायम रहन्छ ।
बाइडनले ट्रम्पको व्यापारयुद्धको भाषा तथा नीति परित्याग गरेको भए पनि वाशिङटन चीनलाई क्षति पुर्‍याउने र कमजोर बनाउने लक्ष्यमा लागिपरेको अनि बेइजिङमा आफूअनुकूलको सरकार बनाउन पनि तत्पर रहेको एटलान्टिक काउन्सिलको लेखले स्पष्ट पार्छ ।
अमेरिकाको कर्पोरेट पूँजीवाद विश्वव्यापी प्रभुत्वमा निर्भर रहन्छ । अमेरिकी पूँजीका लागि साझेदारी, सहकार्य र बहुपक्षीयता घाँडो कुरा हुन् । त्यसैले अमेरिकी योजनाकारहरूले चीन वा अन्य कुनै शत्रुलाई परास्त गर्नैपर्ने हुन्छ ।
तर बहुध्रुवीय विश्वको वास्तविकता तथा एकीकृत विश्व अर्थतन्त्रले अमेरिकाको शीतयुद्ध रणनीतिलाई असान्दर्भिक बनाएको छ ।
ट्रम्पको अमेरिका पहिले नीतिविपरीत बाइडन र डेमोक्रेटहरूले पश्चिमी साझेदारहरूप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । बाइडन साझेदारहरूसँग सम्पर्कमा रहने तथा पराआन्ध्रीय (ट्रान्सएटलान्टिक) साझेदारीलाई पुनरत्थान गर्ने कुरा झिकिरहेका छन् ।
तर यो वाशिङटनले पश्चिमी साझेदारहरूलाई चीनविरुद्धको खेमामा ल्याउन गरेको प्रयास हो । यसले अमेरिकी लक्ष्य हासिल गर्न सहज बनाउने यसको आकलन हो ।
जी७को शिखर सम्मेलन तथा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा बाइडनले चीन र रुसलाई शत्रु मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरे अनि यिनीहरू पश्चिमी साझेदारीका लागि जोखिम भएको बताए ।
तर पश्चिमी साझेदारहरू चीन र रुसलाई एक्ल्याउने नीतिलाई अंगीकार गर्ने स्थितिमा नहुनु बाइडन र स्याथी सरकारको समस्या हो ।
चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यस विषयमा टिप्पणी गरेको छ ः चिनियाँ अर्थतन्त्रको जीवन्ततालाई कसैले रोक्न सक्दैन । विश्वका लागि अमेरिकी बजारबाट टाढिनुको तुलनामा चिनियाँ बजारबाट टाढिनु अकल्पनीय कुरा बन्दै गएको छ ।
चीन अहिले अमेरिकालाई पछि पार्दै युरोपेली संघको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्न पुगेको छ । जर्मनीको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका लागि चीन महत्त्वपूर्ण बजार हो र जर्मनी युरोपेली संघको वस्तुगत नेता हो । जर्मनी र युरोपलाई सस्तो तथा सुरक्षित ऊर्जा आपूर्तिका लागि रुस पनि आवश्यक मुलुक हो ।
सोभियत संघका विरुद्ध विश्वलाई ध्रुवीकृत गरे जस्तो वाशिङटनको प्रयास सफल हुने सम्भावना छैन । यो व्यर्थको प्रयास हो । चीन र रुसले भन्ने गरेको बहुध्रुवीय विश्व वास्तविकता हो । अर्थात्, मुलुकहरूबीचको साझेदारी तथा सहकार्य नै अहिलेका लागि अघि बढ्ने सही बाटो हो ।
अमेरिकी शक्ति भीमकाय डाइनोसर जस्तो हो । बदलिएको राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरणमा यो असान्दर्भिक छ । यसको कार्यविधिको मिति गुज्रिसकेको छ र यो अब लागू हुँदैन ।
लोपोन्मुख अमेरिकी शक्तिले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नका लागि सैन्य भिडन्त गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । तर सौभाग्यवश चीन र रुस शक्तिशाली सैन्य शक्ति हुन् र यिनीमाथि आक्रमण गर्ने सोच अमेरिकाले नपालेको हुनुपर्छ । (यस्तो अवस्थाको सोच आउनु नै आफैंमा निन्दनीय छ तर अमेरिकी शक्तिको घातक प्रकृति यसैबाट झल्किन्छ ।)
अमेरिकाले चीन (र रुस) विरुद्ध शक्तिप्रदर्शन गर्नु बेकार हो र युद्ध सोच्न पनि सकिन्न भने अमेरिकाको भविष्य के त ?
अमेरिकालाई आन्तरिक रूपमा धराशायी नबनाउने हो (पतनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ) भने अमेरिकी समाज र यसको पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएर यसलाई थप लोकतान्त्रिक, समतामूलक र कम सैन्यीकृत अर्थतन्त्र बनाउनु जरूरी छ । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी जनता तयार छन् त ?
स्पुतनिक न्युजमा प्रकाशित फिनियन कनिङघमको आलेखको नेपाली अनुवाद लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले गरेका हुन् ।
म्यान्मारमा प्रदर्शनकारीहरूले गरे राष्ट्रिय एकता सरका...